I-Diocletian's Palace Apartment - I-Airbnb
I-Diocletian's Palace Apartment
Split, Croatia, Split-Dalmatia County, i-Croatia
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Davor&Marina
U-Davor&Marina Ungumbungazi ovelele
Uma ufuna ukuba maphakathi nayo yonke into, kodwa ube nokuhlehla ngokuthula ezixukwini, ifulethi lethu elithokomele nelikhanyayo lilungele lokho nje! Itholakala enhliziyweni yeSigodlo sikaDiocletian, nazo zonke iziza ezisemnyango wakho, kodwa iqhelelene nemigwaqo emikhulu yeSigodlo enegceke layo elihle. Ilungele ukuhlala isikhathi eside, njengoba senze imizamo ekhethekile yokuyibeka nayo yonke into isivakashi esingase siyidinge.
Njengoba ikwisitezi sesi-3 sendlu, leli fulethi likunikeza umbono omuhle ngezindlu ezizungezile, izindonga zangempela zeSigodlo kanye nesonto lombhishobhi laseSplit, iSaint Domnius (Sveti Duje), enye yezimpawu zokuthengisa zedolobha lethu.
Leli fulethi linekamelo lokulala elilodwa elinombhede olingana nenkosi, ikhishi nendawo yokudlela konke endaweni eyodwa, kanye negumbi lokugezela lesimanje.
Sinikeza i-Wi-Fi yamahhala, i-TV enamashaneli amaningi kanye nesiphephetha-moya ngezinsuku ezishisayo zasehlobo nokulala kamnandi ebusuku.
Ikhishi linezitsha nezinto ezibalulekile zokupheka, ifriji elinefriji elincane, isitofu esincane (asikho ihhavini) kanye ne-microwave. Endlini yokugezela kukhona ishawa efakwe odongeni kanye neshawa yasesilingini 'yomphumela wemvula', isomisi sezinwele esine-diffuser (yamantombazane ama-curly;)) kanye ne-heater yodonga.
I-TV engu- 34" ene-I-Netflix
4.98 · 241 okushiwo abanye
Le ndawo empeleni ingaphakathi kweSigodlo sikaDiocletian futhi inezindlu eziningi zamatshe ezihlukaniswe imigwaqo emincane enazo zonke izindawo ezibalulekile zedolobha, amagalari, iminyuziyamu, izindawo zokudlela kanye nezitolo zezikhumbuzo. Kukhona futhi ukunikezwa okumangalisayo kwezindawo zokudlela ezisezingeni eliphezulu namakhefi e-pittoresque kuwo wonke amakhona, lapho ungaphola khona ethunzini, uphuze ikhofi noma udle ukudla okumnandi nokunempilo kwaseDalmatian.
Isitolo segrosa esiseduze siqhele ngamamitha angu-50 kuphela, futhi indawo yokudlela eseduze nekhefi enkulu kuseduze nje. Imakethe eluhlaza kanye nemakethe yezinhlanzi kukude ngemizuzu emi-5. I-Closeby nazo zonke izinhlobo zezitolo, ipulazi, isitolo sezincwadi, iposi, ngisho nezitolo zemfashini ezinophawu...kahle, noma yini ongayidinga!
Sinikeza konke esingakwenza ukuze samukele zonke izihambeli zethu ngemfudumalo, kanye namathiphu namasu mayelana namasiko ethu endawo kanye nokuzungeza i-Split nendawo eyizungezile. Siyatholakala ngaso sonke isikhathi ngesikhathi sokuhlala kwakho nganoma yiluphi uhlobo losizo!
Sinikeza konke esingakwenza ukuze samukele zonke izihambeli zethu ngemfudumalo, kanye namathiphu namasu mayelana namasiko ethu endawo kanye nokuzungeza i-Split nendawo eyizungezile…
UDavor&Marina Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Split, Croatia namaphethelo